Nbanye ndị otu
Mmelite na nyocha ọnọdụ, yana Take Action na akụkọ vidiyo ọhụrụ, akụkọ mgbasa ozi, maapụ na nyocha nke FoRB na ikike mmadụ.
Gụọ akụkọ, mkpu, na akụkọ sitere na US Commission on International Religious Freedom (USCIRF).
Mmelite: UN FORB NEWS
Chọọ weebụsaịtị UN na ReliefWeb maka akụkọ ugbu a na akụkọ gbasara FoRB na ikike mmadụ.
Mgbasa mkpọsa ọkụ: MYANMAR
Gbaa onye otu gị ume ka ọ kwado iwu nke chọrọ gọọmentị US zuru oke na nzaghachi mba ụwa iji tọhapụ ndị isi Burma a tụrụ mkpọrọ yana ịkwado okpukpe na agbụrụ ndị na -eche ime ihe ike na -aga n'ihu ihu.
Soro na mkpọsa anyị ma ọ bụ mepụta nke gị ka ndị na-eme iwu na Washington na gburugburu ụwa na-anụ site n'aka ndị amaala obodo nke nnwere onwe nke okwukwe na nkwenye mba ụwa.
AKWỤKWỌ mkpọsa & ỌZZI
Akụkụ a gụnyere ngwaọrụ iji wusie mmetụta gị na nkwado na mkpọsa. Ihe ndị a dị nkenke na -akọwapụta usoro kachasị mma maka atụmatụ, izi ozi, mkpokọta na ịkwalite okwu.
Ngwaọrụ ime ihe n'ịntanetị
N'ebe a ị nwere ike ịnweta akụrụngwa na nyiwe ịchọrọ itinye aka na mkpọsa mmemme ezubere iche.
1) Ntọala FoRB - AkụAkụ ndị a ga -enyere onye ọ bụla nwere mmasị na nnwere onwe okpukpe mba ụwa aka ịmụta ihe kpatara o ji dị mkpa na ọha mmadụ yana ihe ha nwere ike ime iji chedo nnwere onwe okpukpe na nkwenye maka ndị mmadụ gburugburu ụwa.
2) Akụ maka obodo okwukweAkụrụngwa ndị a ga -enyere ndị isi okwukwe aka ịmata ihe mgbochi dị ugbu a na nnwere onwe okpukpe mba ụwa wee leba anya n'isiokwu ndị ahụ n'obodo ha.
3) Akụrụngwa maka ndị nyocha agụmakwụkwọIhe ndị a ga -enyere ụmụ akwụkwọ aka ịmụta gbasara nnwere onwe okpukpe mba ụwa na ohere na otu ga -enyere ha aka ime mgbanwe.
4) Akụrụngwa maka ndị na -akwado na ndị na -akwado yaAkụrụngwa ndị a ga -enyere ndị na -akwado ọrụ aka ịghọta na ịkwado maka nnwere onwe okpukpe mba ụwa na mpaghara, steeti, mba na mba ụwa ha.
5) Akụrụngwa maka ndị isi na -eto etoAkụ ndị a ga -enyere ndị isi na -eto eto aka ịmụta banyere nnwere onwe okpukpe mba ụwa wee chọpụta ohere na otu ga -enyere ha aka ime mgbanwe.
6) Akụrụngwa maka ndị na -agbachitere iwuAkụ ndị a ga -akwadebe ndị ọka iwu na -akwado ihe ndị ruuru mmadụ na akụrụngwa nyocha iwu yana njikọ netwọkụ iji kpuchido ikike nke mmadụ niile.
7) Akụrụngwa maka ndị na -eme iwuAkụ ndị a ga -enyere ndị na -eme iwu aka ịhazi amụma na atụmatụ iji nwekwuo nnwere onwe okpukpe mba ofesi.
Ọbá akwụkwọ n'ịntanetị
Pịa na onyonyo dị n'elu ka ịnweta ọbaakwụkwọ.
Chọọ ma ọ bụ chọgharịa ọba akwụkwọ ihe ọmụma maka ọdịnaya multimedia na isi mmalite nke otu na mkpado meta haziri.
Ndapụ n'ezi ofufe & Iwu nkwulu
Mgbochi Mgbukpọ & Mgbukpọ arụrụala
Iwu na Iwu
National Systems & nyocha
Mkpagbu na Mkpagbu okpukpe
Ndị Metụtara & Ndị Mkpọrọ
Iwu US & IWU
Kọntaktị Ọchịchị US
Ọ na -egosipụta ihe ndekọ ntuli aka nke ndị otu Senate na Ụlọ Ndị Nnọchiteanya US maka ụgwọ, mkpebi, na mmegharị nke na -akwado nnwere onwe okpukpe mba ofesi ...
Onye na -anọchite anya m na Congress?
Jiri adreesị gị ma ọ bụ pịa na maapụ ịchọta ndị omebe iwu US na onye nnọchi anya gị.
Onye na -ahụ maka iwu IRF
Ọrụ mmebe iwu ugbu a na akụkọ ihe mere eme -Search Congress.gov ma nyochaa iwu metụtara IRF, ọrụ na ndị na -eme ihe nkiri.
US Senate & House IRF votu Records
Iwu IRF 1998 weghachite azụ
IRFA ncheta afọ iri abụọ gara aga
Ememe ncheta afọ iri abụọ a nke Iwu IRF nke 20 weghachitere mbọ aka nke nyere aka ijikọ nnwere onwe okpukpe mba ụwa n'ime amụma mba ofesi US.
Ọnụ ego USG FoRB
Chọọ iwu Gọọmentị US, atumatu, Koodu gọọmentị etiti, ihe omume, akụkọ, wdg: Congress, Alaka Executive, Ọbá akwụkwọ nke Congress, CRS, ndị omebe iwu steeti, nkwekọrịta, wdg.
FoRB site na Mba
Nnwere onwe nke okpukpe n'Africa site na mba
Nnwere onwe okpukpe na Eshia site na mba
Nnwere onwe okpukpe na Europe site na mba
Nnwere onwe ikpe okpukpe na South America site na mba
Nnwere onwe okpukpe site na mba
Chọọ ma lelee usoro iwu obodo nke 197 (ndị edepụtara na ike) ma tulee etu ha si echebe ma ọ bụ gbochie FORB.
Mgbakọ mba niile
Gụọ mgbakọ mba ụwa na nkwekọrịta metụtara FoRB na ikike mmadụ ndị ọzọ.
Isiokwu nyocha obodo
Usoro iwu nke ụwa
Akwụkwọ ndekọ aha ụwa nke ndị pere mpe na ndị amaala (nchekwa data nwere ike ịchọta)
Ndị mmadụ nọ n'okpuru iyi egwu (Map mmekọrịta)
Mba USCIRF nwere oke nchegbu
FORB site na Obodo (Wikipedia)
Ndepụta nlele ụwa mepere emepe (2020)
Nnwere onwe Internetntanetị
Nnwere onwe okpukpe Uyghur
Ndapụ n'ezi ofufe & nkwulu
Mgbukpọ & arụrụala
Ndị Mkpọrọ nke Akọnuche
FỌBỤRỤ ỤLỌ NETWORK
Chọọ njikọ na akụkọ nke okirikiri ọgbakọ na ọgbakọ FoRB mpaghara.
International Roundtable Freedom Religion na -eji Zoom akwado nzukọ a na -enwekarị. Na ngalaba a ị nwere ike RSVP, nweta Zoom, chọta enyemaka mgbagha nsogbu, wee nweta akwụkwọ ozi na akwụkwọ ọkwa site na ibe a.
Ihe omume IRF ROUNDTABLE (DC)
Kalịnda na ndepụta oge ihe omume na -abịa maka DC IRF Roundtable.
Ịgbachitere nnwere onwe
Enwere ike iji ebe nkwado a dị n'ịntanetị, jupụtara na ngwa ọrụ na ozi, na nchekwa na nkwalite nnwere onwe nke okpukperechi, nkwenye na akọ na uche zuru ụwa ọnụ.
Gịnị Na-eme Ugbu A
Mgbasa Ozi - Mee MGBE
Mgbasa ozi Mgbasa Ozi Burma
Isi ihe: Myanmar/Berma
Ndepụta mmemme IRF na-abịa n'ihu
Ihe omume okirikiri IRF (DC)
Pịa njikọ iji nweta akụrụngwa echekwabara
Ihe ndabere nke nnwere onwe okpukpe: Ihe ndị a ga-enyere onye ọ bụla nwere mmasị na nnwere onwe okpukpere chi mba ụwa aka ịmụta ihe mere o ji dị mkpa maka ọha mmadụ na ihe ha nwere ike ime iji chebe nnwere onwe nke okpukpe na nkwenye maka ndị mmadụ gburugburu ụwa. Pịa ka ịnweta akụkọ sitere na gburugburu ụwa, ụzọ ị nwere ike isi tinye aka, yana njikọ iji nweta mkpọmkpọ ebe na mmemme. Nweta akụrụngwa
Ogbe okwukwe: Akụrụngwa ndị a ga-enyere ndị isi okwukwe aka ịmata ihe mgbochi dị ugbu a na nnwere onwe okpukperechi nke mba ụwa ma kwuo okwu ndị ahụ na obodo ha. Pịa ka ịnweta akụkọ, ozi gbasara ndị nnọchi anya mpaghara na-arụsi ọrụ ike iji kwalite IRF, yana akụrụngwa ọrụ maka ndị isi ịkọrọ ndị obodo ha. Nweta akụrụngwa
Ndị nyocha agụmakwụkwọ: Ihe ndị a ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịmụta banyere nnwere onwe okpukperechi na ohere na òtù ndị ga-enyere ha aka ime mgbanwe. Pịa ka ịnweta ozi na ozi gbasara IRF, ohere ị nweta ọzụzụ, nyocha agụmakwụkwọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Nweta akụrụngwa
Ndị na-eme ihe ike na ndị nkwado: Akụrụngwa ndị a ga-enyere ndị na-eme ihe ike aka ịghọtakwu na ịkwado maka nnwere onwe okpukperechi na mpaghara ha, steeti, mba na mba ụwa. Pịa ka ịnweta ozi gbasara ihe gbasara nnwere onwe okpukpe ugbu a gburugburu ụwa, ngwa nkwado, atụmatụ ndị gara aga, na ụzọ ị nwere ike ịmepụta mkpọsa nke gị iji kwalite IRF. Nweta akụrụngwa
Ndị isi na-eto eto: Ihe ndị a ga-enyere ndị isi na-eto eto aka ma mụta banyere nnwere onwe okpukperechi nke mba ụwa ma chọpụta ohere na òtù ndị ga-enyere ha aka ime mgbanwe. Pịa ka ịnweta ozi na ozi gbasara IRF, ohere ị nweta ọzụzụ, nyocha agụmakwụkwọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Nweta akụrụngwa
Ndị na-agbachitere iwu: Akụrụngwa ndị a ga-akwado ndị ọka iwu na-akwado ikike mmadụ nwere akụrụngwa nyocha gbasara iwu yana njikọ netwọk iji chebe ikike ikike mmadụ niile. Pịa ka ịnweta ngwaọrụ nyocha n'ịntanetị, mmelite IRF, ozi gbasara okwu dị ugbu a na netwọkụ iwu. Nweta akụrụngwa
Ndị na-eme amụma: Akụrụngwa ndị a ga-enyere ndị na-eme iwu aka ịmepụta atumatu na atụmatụ iji kwalite nnwere onwe okpukperechi nke mba ụwa. Pịa ka ịnweta nyocha, mmelite IRF, ozi gbasara okwu dị ugbu a, yana otu ị ga-esi tinye aka na IRF site na iwu na ịkwado. Nweta akụrụngwa
Mụtakwuo maka okwu metụtara nnwere onwe nke okpukperechi na nkwenye (FORB).
Kwadebe & zụọ
Omume kachasị mma maka nkwado na mkpọsa.
Kwadebe onwe gị maka ime ihe
Na-akpali ma na-edu mgbanwe maka ndị adịghị ike na ndị a na-emegbu emegbu. Mepụta ma ọ bụ sonye na mkpọsa.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ugwu mmadụ niile
Churchlọ Nzukọ, VA 22046
Kpọtụrụ anyị site na Email
Ebe nnwere onwe dị n'ịntanetị
Nye onyinye/kwado Freedom Center
Nwebiisinka © 2021 21Wilberforce | amụma nzuzo | Usoro ojiji | Haziri site ICatalyst CKS
Njikọ E nwere US